I-LGD-2226 powder (328947-93-9) hplc =98% | Yenza i-SARMS powder
/ iimveliso / SARMS / I-LGD-2226 powder
SKU: 328947-93-9. Udidi: SARMS
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-LGD-2226 powder (328947-93-9), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Uvavanyo lwezonyango I-LGD-2226 powder kwaye iziphumo zayo ziyaqhubeka kodwa iimvavanyo zokuqala zibonise ukuba imichiza ineempembelelo ezithile ze-anabolic kwiithambo kunye nezicubu zomzimba. Iyona nkulu kakhulu nangona i-LGD-2226 powder yinto yokuba izilingo kude zibonise ukuba zineempembelelo ezimbalwa kwi-prostate kunye namanqanaba ama-hormone okulinganisa i-steroids nezinye i-SARM.
I-LGD-2226 enee powder eziyisiseko eziphambili
Umgqomo we-LGD-2226 kumjikelezo weSARMS
Ziziphi iindidi ezifunekayo endizikulindele kwi-LGD-2226 powder
I-powder LGD-2226 isebenza njani
I-LGD-2226 powder yi-SARM enamandla kunye ngomlomo esebenza njengamanye. Ezi iithagethi ze-SARM zeseli zesisundu kunye nethambo. Inceda ekusebenzeni izenzo ze-androgenic kwiimeko apho amanqanaba e testosterone emzimbeni akwanele ukwenza njalo. Umzimba uvelisa i-testosterone ngendlela elawulwayo kwaye kwezinye iimeko, i-hormone ayinakho okwenzela isenzo so-androgeniki esifanelekileyo ukuze kugcinwe umzi womzimba ukuze usebenze.
Ukongeza kule nto, kwiimeko ezibi kakhulu, i-testosterone eyenziwa emzimbeni mhlawumbi encinci, ekhokelela ekuxothweni kwemisipha. I-LGD-2226 powder ingasetyenziswa njengesisombululo kuzo zonke le micimbi. Isenzo salo sokhetho siya kubangela imisebenzi ye-androgenic kwiiseli ezinamahlunu xa kuqinisekiswa ukuba umveliso oqhelekileyo we-testosterone uhlala uhleli. Kubafundi bomzimba, oku kunokukunceda ukuphucula umgangatho wokunyamekela, okukhokelela kwiziphumo ezingcono.
I-SARMS okanye i-Selective Androgen Receptor Modulators yinkqubo entsha ye-androgensthat umsebenzi ofanayo kunye ne-anabolic steroids kunye neprohormones kuncinci kwiziphumo eziqhelekileyo ze-steroids ezizisa. Abagijimi abaninzi kunye nabazimba bomzimba baye batshintshela kwiSARMS njengoko kukhuselekileyo kwaye kusebenza ngakumbi ekwakheni imisipha kunye nokwandisa amandla ngaphandle kokubeka impilo engozini.
Enye i-SARM eyenza amagagasi namhlanje i-LGD-2226 powder - i-SARM kwisigaba sayo sokuqala esisikhumbuza esiphuhliswa njengonyango wokuxhatshazwa kwemisipha kunye ne-osteoporosis. Ulwazi lusekuncitshisiwe, kodwa yintoni esiyaziyo malunga ne-LGD-2226 powder njengangomzuzu.
I-LGD-2226 powder yi-aconist esebenzayo ngomlomo, enobuchule kunye nekhetho ye-androgen receptors (AR) ekholelwa ukuba ibe neempembelelo ze-anabolic zombini kunye nezicubu zethambo, kodwa kunemiphumo embalwa kwi-prostate isisindo kunye ne-hormone ye-luteinizing (i-hormone eveliswa i-pituitary gland kumadoda nabasetyhini) amanqanaba xa kuthelekiswa ne testosterone.
Inqubo entsha yokunyanga kwe-osteoporosis emadodeni, kwaye mhlawumbi abafazi, kukuphuhliswa kwe-androgen receptor modulators (SARMs) ezikhethiweyo ezingakhuthaza ukubunjwa kwethambo elitsha kunye nokunciphisa kakhulu umsebenzi ogqithiseleyo kwi-prostate, kunye nokunciphisa umsebenzi ococekileyo kubafazi . Kwiminyaka emininzi edluleyo, siye saqalisa inkqubo yokufumana nokuphuhlisa iveli, okungenayo i-steroidal, i-modorators ye-androgen ye-receptor esebenzayo ngomlomo (i-SARMs) ehlinzeka ngeenkonzo eziphuculweyo kunye nokunciphisa ingozi kunye nemiphumo emibi. Kwizifundo zakutshanje, sisebenzise i-rat ye-orchiectomized (ORX) yindoda yesilisa njengomzekelo wezilwanyana we-hypogonadism yesintu ekuvavanyeni ukusebenza kwe-LGD2226, i-SARM engeyiyo enokubanjiswa, engeyona i-5alpha-reducible. Sihlolisise umsebenzi we-LGD-2226 powderon boneover return, amandla esithambo kunye neethambo, kunye nokuvavanya imiphumo eyenziwa kwiithagethi ezixhomekeke kwi-androgen, ezifana ne-prostate, vesicles and muscle. Ukulahlekelwa okukhulu kweethambo kwimbonakalo kwizilwanyana ze-ORX, kwaye le ntlupheko ikhuselwe iiSARM, kunye neerrogens eziqhelekileyo. Amanqaku e-biochemical of bone transover aveza ukunyuka kwethambo ekuhambeni kwee-orrogen ezingenazo izilwanyana eziye zaphazamiseka kwizilwanyana ze-ORX eziphathwe nge-SARM yomlomo, i-LGD2226, ngexesha lonyango lwe-4 ngenyanga. Ukungafani kwimihlaba yokwakha kunye namathambo emfuyo kuye kwafunyanwa ngeengxelo ze-histomorphometric kunye neengcingo, ezibonisa impembelelo ye-LGD-2226 powderon quality quality kwiiriti ezingenayo i-androgen. Uhlalutyo lwe-Histomorphometric lwathambo lwama-cortical luchaza umsebenzi ohlukile we-LGD-2226 powderin periosteal bone. I-LGD-2226 powderwas inokukwazi ukukhusela ukulahleka kwethambo nokugcina umgangatho weethambo kwiinqununu ze-ORX ngokuvuselela ukubunjwa kwethambo, ngeli xesha likhubaza ukubuyiswa kwethambo. I-LGD-2226 powderalso yenza umsebenzi we-anabolic kwi-leverator muscle. Kuthatyathwe ndawonye, ​​ezi ziphumo zibonisa ukuba ii-SARM ezisemthethweni-ezisebenzayo, ezingekhoyo-steroidal ziba luncedo kwizixhobo zombini kunye nesifuba kumadoda asebekhulile e-hypogonadal ngokusebenzisa imisebenzi yabo ye-anabolic. Ekubeni i-SAR zombini ikhusela ukulahleka kwethambo, kwaye iphinde ivuselele ukubunjwa kwethambo elitsha, zinokuba neenzuzo ezintle ezinxulumene neendlela ezisetyenziselwa ukuphikisana nazo. Ukudibene nomsebenzi wabo kumisipha kunye nokukwazi kwabo ukugcina okanye ukubuyisela i-libido, banikezela iindlela ezintsha zokwelapha kwi-hormone yabesilisa nabesifazane.
I-LGD-2226 Raw Powder
I-LGD-2226 yePowder Marketing
Ngaba i-LGD-2226 ipowder ibenayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Indlela yokuthenga i-LGD-2226 powder kwi-AASraw
I-LGD-2226 Raw Powder Recipes: